Raajneeti - Setopati | Setopati - Nepal's Digital Newspaper
To: हेटौंडामा कांग्रेस-एमाले रोचक भिडन्त, ४५ मतले कांग्रेसको अग्रता
हेटौडा, जेठ ९ (सेतोपाटी) - हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको मेयरमा एमाले र कांग्रेस उम्मेदवारबीचको टक्कर निकै रोचक बनिरहेको छ । १९ वटा वडा रहेको उपमहानगरपालिकाका पछिल्लो मतगणना अनुसार दुई उम्मेदवारबीच जम्मा ४५ मतको फरक देखिएको छ ।
भरतपुर नगरपालिकामा एमालेले अग्रता बढायो
भरतपुर, जेठ ९ (सेतोपाटी) - भरतपुर महानगरपालिकामा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार देवी ज्ञवालीले अग्रता बढाएका छन्। सार्वजनिक भएको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार ज्ञवालीले माओवादी केन्द्रकी रेणु दाहालभन्दा ३३८९ मतान्तरमा अग्रता लिएका हुन्।
पोखरामा एमालेले अग्रता बढायो, यस्तो छ पछिल्लो मतगणना
काठमाडौं, जेठ ९ - पोखरा महानगरपालिकामा एमालेले अग्रता बढाएको छ। पछिल्लो सार्वजनिक भएको मत परिणाम अनुसार नेकपा एमालेका उम्मेद्वार मानबहादुर जिसीले २६ हजार ७ सय ८२ मत पाएका छन्। यस्तै नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार रामजी खाँडले २३ हजार ४४९ मत पाएका छन्।
बेलायतको म्यानचेस्टरमा बम आक्रमण, कम्तिमा १९ को मृत्यु
म्यानचेस्टर , जेठ ९ - बेलायतको म्यानचेस्टर शहरस्थित एक एरिनामा आत्मघाती बम आक्रमणमा परी कम्तिमा १९ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। म्यानचेस्टर प्रहरीले यसको पुष्टी गरेको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्।
काठमाडौं, जेठ ९ - प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले भोलि (जेठ १०) गते प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन लागेको पार्टीको वैठकमा जानकारी गराएका छन्। यो खबर हामीले आजको नेपालसमाचार पत्रबाट लिएका हौ।
काठमाडौं, जेठ ९ (सेतोपाटी) - काठमाडौं महानगरपालिकामा नेकपा एमालेका विद्यासुन्दर शाक्यले ३३२४७ मत ल्याएर आफ्नो ९ हजारभन्दा बढी मतको अग्रता कायम राखेका छन्।
सेतोपाटी, काठमाडौं, जेठ ९ - प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि भर्ना गरिएका म्यादी प्रहरीलाई दोस्रो चरणको निर्वाचनमा पनि खटाउने गरी म्याद थप गरेको छ । Comments
काठमाडौँका १० नगरमा ६ एमाले, ४ कांग्रेस
सेतोपाटी संवादाता , काठमाडौँ,जेठ ८ - काठमाडौँ जिल्लाका १० नगरपालिकाको मतगणना आज सकिएको छ। ६ वटा नगरपालिकामा एमालेका मेयर उमेद्वारले जित हात पारेका छन् भने ४ वटामा कांग्रेसले जितेका छन्।
पोखरा महानगरमा एमाले २ हजार ७ सय ५० मतले अगाडि
सेतोपाटी, पोखरा, जेठ ८ - पोखरा महानगरको मयेर उपमेयरको पछिल्लो मतपरिणाम सार्वजनिक भएको छ। प्राप्त पछिल्लो मतगणना अनुसार एमालेका मेयर उम्मेदवार मानबहादुर जिसीले २५०९६ मत ल्याएर अग्रता लिएका छन्। त्यस्तै कांग्रेसका रामजी कुबँरले २२३४६ मत पाएका छन्। Comments
भरतपुरका एमाले उम्मेदवार ज्ञवाली भन्छन्- यहाँका जनतासँग मै भिजेको छु, मैले नै चुनाव जित्छु
शोभा शर्मा, काठमाडौं, जेठ ८ - भरतपुर महानगरपालिकाको मत लगभग अाधा गनिसक्दा पनि यहाँ को मेयर बन्छ भन्ने अझै निश्चित भइसकेको छैन। एमालेका देवी ज्ञवाली र कांग्रेस-माअोवादी केन्द्रकी साझा उम्मेदवार रेणु दाहालबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा देखिएको छ। अन्तिम मतपरिणाम ज्ञवाली वा दाहाल कसका पक्षमा जान्छ भन्नेमा सबैका आ-आफ्नै विश्लेषण छन्। हामीले स्वयं उम्मेदवारहरुलाई सोध्यौं- के तपाईंले जित्नुहुन्छ? कसरी? पढ्नुहोस आज एमाले उम्मेदवार देवी ज्ञवालीको विश्लेषण:
बुढानिलकण्ठमा एमाले विजयी
काठमाडौं, जेठ ८ - काठमाडौंको बुढानिलकण्ठ नगरपालिकाको प्रमुखमा नेकपा (एमाले)का उद्धव खरेल विजयी भएका छन्। खरेलले १३ हजार २४८ मत प्राप्त गरी विजयी भएका हुन्। उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी नेपाली कांग्रेसका राजु श्रेष्ठले आठ हजार ९२७ मत प्राप्त गरेको निर्वाचन कार्यालयले जनाएको छ ।
तीन दिन बित्दा पनि सुरु भएन चाँगुनारायणको मतगणना
भक्तपुर, जेठ ८ - भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकामा विवादका कारण मतगणना रोकिएको तीन दिन बितिसक्दा पनि सहमति नभएपछि मतगणना गर्ने कार्य अनिश्चित भएको छ । गत शुक्रबारदेखि मतगणनामा विवाद भएपछि रोकिएको मतगणना आजसम्म पनि सुरु हुन नसकेको हो ।
काठमाडौं महानगरमा एमाले साढे ९ हजार मतले अगाडि
काठमाडौं महानगरपालिकामा नेकपा एमालेका विद्यासुन्दर शाक्यले झन्डै साढे ९ हजार मतको अग्रता लिएका छन्।
वीरगन्ज र विराटनगरलाई महानगरपालिका बनाउने मन्त्रिपरिषद निर्णय, २२ स्थानीय तह थपिए
सेतोपाटी संवाददाता, काठमाडौं, जेठ ८ - स्थानीय तहको संख्या पुनरावलोकन गर्न गठित कार्यदलको सिफारिसअनुसार सरकारले वीरगन्ज र विराटनगरलाई महानगरपालिका बनाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको सोमबार अबेर बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
काठमाडौंको बुढानिलकण्ठ नगरपालिकामा एमालेका उद्धव खरेल विजयी
सेतोपाटी, काठमाडौं, जेठ ८ - काठमाडौंको बुढानिलकण्ठ नगरपालिकामा एमालेको जित भएको छ। मेयरका लागि एमाले उम्मेदवार उद्धव खरेलले जित हासिल गरेका हुन्। उपमेयरमा पनि एमालेकै रमा राई विजयी भएकी छन्।
रेणु २९ सय मतले पछि परिन्
सेतोपाटी, काठमाडौं, जेठ ८ - भरतपुर महानगरपालिकाको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार रेणु दाहाल २९ सय २ मतले पछि परेकी छन् । एमालेका तर्फबाट मेयरका उम्मेदवार देवी ज्ञवालीले २३ हजार २ सय ८० मत पाएका छन् ।
कालिकोटको नरहरिनाथमा मतगणना सुरू, माओवादी केन्द्रको अग्रता
काठमाडौं, जेठ ८ (सेतोपाटी) - कालिकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकामा मतगणना सुरू भएको छ। हालसम्मको गणना अनुसार माओवादी केन्द्रले अग्रता लिएको छ। पछिल्लो परिणाम अनुसार प्रमुखका लागि माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार अग्र बहादुर विष्टले ५१९ मत पाएका छन् । त्यस्तै एमालेका धीर बहादुर विष्टले ३८५ र कांग्रेसका मीन बहादुर बोगटीले २३७ मत पाएका छन्।
काठमाडौं महानगरको ५०% मतगणना सकियो, अझै पाँच दिन लाग्ने अनुमान
काठमाडौँ, जेठ ८ - स्थानीय तह निर्वाचनअन्तर्गत मतगणना सुरु भएको एक हप्ता सकिँदा काठमाडौँ महानगरपालिकाको मतगणना पचास प्रतिशतभन्दा बढी सकिएको छ । सोमबारदेखि सुरु गरिएको मतगणनाअन्तर्गत अहिले एक हप्तामा पचास प्रतिशतभन्दा बढी गणना गरिएको मुख्य निर्वाचन अधिकृत दीपेन्द्र अधिकारीले बताए । कुल दुई लाख ७९ हजार ३१६ मतदाता रहेको कामपामा करिब ७३ प्रतिशत (एक लाख ७२ हजार ६८३ ) मत खसेको थियो । राष्ट्रिय सभागृहमा भइरहेको मतगणनामा निर्वाचन कार्यालयले १३ स्थानमा गणना गरिरहेको छ ।
यस्तो छ काठमाडौं महानगरको पछिल्लो मतपरिणाम
काठमाडौं, जेठ ८ (सेतोपाटी) - काठमाडौं महानगरपालिकामा एमालेको अग्रता कायमै छ। जारी भएको पछिल्लो मत परिणाम अनुसार नेकपा एमालेका विद्यासुन्दर शाक्यले ३२९३१ मत पाएका छन्।
वीरगन्ज र विराटनगर महानगरपालिका बनाउन सिफारिस, कहाँ कति स्थानीय तह थप्ने (सूचीसहित)
काठमाडौं, ८ जेठ (सेतोपाटी) - स्थानीय तहको संख्या पुनरावलोकन गर्न गठीत कार्यदलले वीरगन्ज र विराटनगरलाई महानगरपालिका बनाउनको लागि सिफारिस गरेको छ। सोमबार बसेको कार्यदलको बैठकले तराई मधेशमा २३ वटा गाँउपालिका थप्ने समेत सिफारिस गरेको छ।
घरजग्गाले उकासेको नगरमा हरियाली योजना
समुन्द्र राज घिमिरे, सीतापाइला (रामकोट), जेठ ८ - आफू एक्लैले ९० लाख लगानी गरेर नगरपालिकाका पाँच सय परिवारलाई पानी वितरण गरेको बताउने मोहन राजाको शासनकालसम्म घरजग्गा व्यवसायमा संलग्न थिए। घरजग्गा व्यवसायबाट २२/२३ करोड हाराहारी कमाइ भएपछि पूर्णकालीन राजनीतिमा लागेको उनी बताउँछन्।
ट्रम्प इजरायल र प्यालेस्टाइन भ्रमणमा
इजरायल, जेठ ८ - मध्यपूर्वी राष्ट्रहरुको औपचारिक भ्रमणका क्रममा रहेका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इजरायल र प्यालेस्टाइनको भ्रमण गर्दै छन्। साउदी अरबको दुइदिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा मुसलमान नेताहरुलाई सम्बोधन गरेका राष्ट्रपति ट्रम्पले अब इजरायल र प्यालेस्टाइनको भ्रमण गर्न लागेका हुन्।
काठमाडौंको वडा नम्बर ५ मा कांग्रेस र २२ मा एमाले विजयी
काठमाडौं जेठ ८ - काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर ५ र २२ को मतपरिमाण सार्वजनिक भएको छ। ५ नं वडामा नेपाली कांग्रेसका रमेश डङ्गोल १६८० मत ल्याई विजयी भएका छन्।
एमालेका पूर्व सभासद चौहान र केन्द्रीय सदस्य गिरीद्धारा पार्टी परित्याग
वीरगन्ज, जेठ ८ - नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य प्रल्लाद गिरी र पूर्व सभाषद एवं क्षेत्र नं ४ का अध्यक्ष प्रद्युमन चौहानले पार्टी परित्याग गरेका छन्। मधेस आन्दोलनबाट उठेका मागलाई एमालेले अपमान गरेको भन्दै एमालेका केन्द्रीय सदस्य गिरी र पूर्व सभासद चौहानले राजीनामा दिएका छन्। Comments
पोखरा महानगरपालिकामा एमालेको अग्रता कायमै, उपमेयरमा पनि एमालेनै
पोखरा, जेठ ८ - लामो समय अवरूद्ध भएर सोमबार दिउँसो १ बजेबाट गणना सुरू भएको पोखरामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार रामजी कुँबरले १९ हजार ८ सय ८४ मत पाएका छन्। यस्तै उपमेयरमा पनि एमालेको अग्रता कायमै छ। पछिल्लो मत परिणाम अनुसार एमालेकी उम्मेद्वार मन्जु गुरूङले २० हजार ५ सय १४ मत पाएकी छन्। नेपाली कांग्रेसकी उम्मेद्वार सरस्वती गुरूङले १८ हजार ८ सय ६६ मतसहित एमालेलाई पछ्याइरहेकी छन्।
ललितपुर महानगरमा एमाले ११, कांग्रेस ९, माओवादी २ र १ स्वतन्त्र वडाध्यक्ष
ललितपुर, जेठ ८ (सेतोपाटी) - एमालेले ११ वडा जित्दा कांग्रेसले ९ वडा जितेको छ। २३ वडामध्ये एमालेले २,३,४,५,११,१२,१५,१७,१८,१९ र २३ वडामा एमाले विजयी भएको छ भने १,६,७,८,९,१३,१४,१६ र २० वडामा कांग्रेस विजयी भएको छ। माओवादी केन्द्रले २१ र २२ वडामा जित हात पारेको छ भने वडा नम्बर १० मा स्वतन्त्र उम्मेदवारले वडाध्यक्ष जितेका छन्।
काठमाडौंको कागेश्वरी-मनोहराको मेयरमा नेकपा एमालेका कृष्णहरि थापा निर्वाचित
काठमाडौं, जेठ ८ (सेतोपाटी) - काठमाडौंको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिको मेयरमा नेकपा एमालेका उम्मेद्वार कृष्णहरि थापा विजयी भएका छन्। यस्तै उपमेयरमा एमालेकै विन्दु सिंखडा निर्वाचित भएकी छन्। मेयरमा थापाले नेपाली कांग्रेसका उम्मेद्वार उपेन्द्र कार्कीलाई हराएका हुन् भने उपमेयर सिंखडाले नेपाली कांग्रेसकी अनिता अधिकारीलाई हराएकी हुन्।
३१ नगरपालिकामा कांग्रेसको जित (सूची)
सेतोपाटी , काठमाडौं जेठ ८ - स्थानीय तहको निर्वाचनमा ९२ नगरपालिकाहरुमध्ये ३ नगरपालिकाको नतिजा आउन बाँकी नै छ। हालसम्म ८९ नगरपालिकाको नतिजा आइसकेको छ जसमा नेपाली कांग्रेसले ३१ वटामा जित हासिल गरेको छ। कांग्रेसले जितेका नगरपालिकाहरु यी हुन्ः
यी हुन् एमालेले जितेका ४७ नगरपालिका
सेतोपाटी, काठमाडौं, जेठ ८ - स्थानीय तहको निर्वाचनमा ९२ नगरपालिकाहरुमध्ये ३ नगरपालिकाको नतिजा आउन बाँकी नै छ। हालसम्म ८९ नगरपालिकाको नतिजा आइसकेको छ जसमा नेकपा एमालेले ४७ वटामा जित हासिल गरेको छ। एमालेले जितेका नगरपालिकाहरु यी हुन्ः
काठमाडौं महानगरमा ९६ हजार मत गन्दा रञ्जुलाई १२.७, किशोरलाई ९.५ प्रतिशत
सेतोपाटी संवाददाता, काठमाडौं, जेठ ८ - काठमाडौं महानगरपालिकामा अहिलेसम्म ९६ हजार मतगणना सकिएको छ। अहिलेसम्मको नतिजाअनुसार विवकेशील नेपाली र साझा पार्टीले दुई प्रमुख राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेसँग रामै प्रतिस्पर्धा गर्न सफल भएका छन्।